Ngizokwenza okushiwo yi-ANC: Cele | Isolezwe
Ngizokwenza okushiwo yi-ANC: Cele
Isolezwe / 12 November 2012, 12:05pm /
OWAYENGUKHOMISHANA wamaphoyisa uMnuz Bheki Cele uthi angeke afake isicelo ku-ANC sokuthi afune ukuba neqhaza ezinhlakeni zayo kodwa kuyonquma amalungu ukuthi afunani ngaye.	Isithombe: BONGIWE MCHUNU
OWAYENGUKHOMISHANA wamaphoyisa kuleli uMnuz Bheki Cele uthi akasoze afaka isicelo ku-ANC uma kukhona iqhaza afuna ukuba nalo ezinhlakeni zale nhlangano kodwa uzimisele ukwenza noma yini uma ayobe ekhethelwe kuyo ngamalungu alo mbutho.
UCele ukhulume kanje ngesikhathi ephawula ngokuthi ngabe usenaso yini isifiso sokuthi kube neqhaza alibambayo ku-ANC njengoba kungekho akwenzayo selokhu akhishwa ekomitini lesigungu esiphezulu ngesikhathi eyofakwa emaphoyiseni.
“Selokhu ngaba yilungu le-ANC kusukela kudala kuze kube yimanje futhi kuyoze kube phakade kodwa angikaze ngifake isicelo sokufuna ukuthi kube khona engikwenzayo enhlanganweni, kuzo zonke izinhlaka esengike ngaba kuzo ngiyakhethwa. Okusho ukuthi uma i-ANC inquma ukungijuba ekutheni ngenze noma yini ngiyovuma ngikwenze lokho,” kusho uCele.
Ngesikhathi uCele exoshwa emaphoyiseni akukho lapho abesegxile khona ngokwe-ANC njengoba yamkhipha ku-NEC ngenhloso yokuthi kungabi bikho ukushayisana phakathi komsebenzi wakhe nezombusazwe.
Lo mholi uthathwa njengalabo abasemkhankasweni wokuthi kuchithwe uMengameli Jacob Zuma ekutheni athathe ihlandla lesibili.
Ngaphandle kwalokho kuke kwavela ukuthi kunabaholi be-ANC esifundazweni abazama ukushaya uCele ngesithende kangangokuthi uma kukhona umcimbi weqembu okufanele ayokhuluma kuwo uyahlehliswa noma kungayimuntu.
Nokho uNobhala uMnuz Sihle Zikalala useke wakuchitha lokhu wathi i-ANC akekho umuntu oyilungu layo emkhiphela ngaphandle noma emkhipha inyumbazane uma kunezinto zenhlangano.
Kumanje uCele usebonakala ematasa egatsheni le-ANC langakubo eLamontville, eThekwini lapho okuqhubeka khona imihlangano yokubhunga ngezindaba zaseMangaung.
Khonamanjalo uCele uzwakalise ukukhathazeka ngokugxekwa kwamaphoyisa uma elwa nezigebengu eziyingozi wathi sekuyacaca ukuthi osekuzokwenzeka uma ebona izigebengu zihlomile uzobaleka ukuze avikele ukudubulana nazo ngoba zona zisuke zidubula.